Accueil > Gazetin'ny nosy > Lalàm-pifidianana: Natao tsy hahazoan-dRavalo sy Andry hilatsaka
Lalàm-pifidianana: Natao tsy hahazoan-dRavalo sy Andry hilatsaka
Mandeha dia mandeha ny fotoana amin’ny tsy maintsy hirosoan’i Madagasikara amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ity taona 2018 ity. Hatramin’izao nefa dia asain’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina miaina ao anatin’ny aizim-baovao tanteraka ny vahoaka Malagasy. Tsy misy mazava ny vaovao rehetra tokony ho fantatra mahakasika ity fifidianana ity na kely aza. Vitain’izy ireo amin’ny resaka hoe : “jereo ny Lalàmpanorenana” izay manontany izany. Na izany aza dia mazava ny raharaha fa tsy maintsy misy ny antsoina hoe lalàna fampiharana ny ao ao anatin’ny Lalàmpanorenana io. Io ilay antsoina hoe lalàna fehizoro, ka ny governemanta no mamolavola izany, izay entina eny amin’ny Antenimierampirenena ho fankatoavana izany na tsia. Manana 15 andro ny parlemantera vao afaka mivory raha toa ka tonga tao amin’ny birao maharitra ity volavolan-dalàna ity. Aorian’izay vao azo andraisana fanapahan-kevitra ilay lalàna. Midika izany fa hihoatra ny 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana hataon’ny depiote mba handaniana ity lalàna ity.
Hatramin’izao fotoana izao dia mbola tsy tonga eny amin’ny Antenimierampirenena ity volavolan-dalàna ity. Io ilay tetika ratsy sy maloto izay kotrehin’ny mpitondra fanjakana amin’izao fotoana izao satria ny mpikambana ao anatin’ny governemanta ihany sy ny lohandohany ao amin’ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) izay antokon’ingahy Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenena no mahalala izany. Efa nisy ny fivoriana nataon’ny governemanta tany Mahajanga ny faramparan’ny taona 2017 iny nefa tsy mbola navoaka ihany ity lalàm-pifidianana ity nefa voalazan’ny olona akaiky ny fitondrana fa isan’ny nandraisana fanapahan-kevitra tamin’izany ny lalàm-pifidianana.
Ny faha 5 janoary 2018 dia nanambara ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha raha nifampiarahaba tamin’ny masoivoho vahiny miasa eto Madagasikara sy ireo olona ao anatin’ny andrim-panjakana fa tsy maintsy misy ny fifidianana amin’ity taona ity. Rahoviana ary amin’ny fotoana manao ahoana? Tsy misy mazava izany na kely aza, ary tsy voafaritra koa ny fotoana hanaovana izany. Tetika maloto tanteraka no kotrehin’ny fitondrana mba hialany amin’ny olona atahorany.
Depiote vitsivitsy no miady hevitra momba ity raharaha ity nanomboka ny voalohan’ny herinandro teo tao Tsimbazaza. Mbola nanamafy ity depiote mpomba ny fanjakana ity omaly fa atao izay tsy hahazoan-dRavalomanana Marc sy Andry Nirina Rajoaelina milatsaka ho fidiana. Nanambara ilay depiote fa ingahy Marc Ravalomanana dia ho sakanana amin’ny raharaham-pitsarana azy sy ny didy izay efa manameloka azy amin’izao fotoana izao. Izany hoy ihany ity depiote ity no anton’ireo fanenjehana azy amin’ny raharaha Jirama, orinasa AAA, ary ny raharaha famonoana olona tamin’ny 7 febroary 2009. Sarotra hoy ihany ity depiote ity ny hahazoan’ingahy Ravalomanana Marc hilatsaka noho izany.
Ho an’i Andry Nirina Rajoelina indray dia nanambara ity depiote ity fa amin’ny resaka taona indray no hamelezana azy. Hatao ao anatin’ny lalàm-pifidianana hivoaka eo fa ny olom-pirenena feno 45 taona noho mihoatra ihany no mahazo milatsaka. Ingahy Andry Nirina Rajoelina nefa mbola 44 taona amin’ity taona ity. Mazava ho azy fa tsy ho afaka milatsaka koa izany ity filohan’ny fanjakana Tetezamita ity.
Tsy izay ihany no tetika hisakanana ny olona tsy hahazo hilatsaka fa tsy havela hilatsaka amin’ny fifidianana koa izay kandidà tsy atolotra ny antoko pôlitika. Tsy ho ekena intsony ny kandidà tsy miankina toa ny teo aloha. Hanakanana ireo Malagasy mipetraka any ivelan’ny Madagasikara sy manao iraka any izany tetika izany. Mbola misy fepetra hafa izay hapetraka koa ao amin’ity lalàm-pifidianana ity ho fanakanana ny olona izay tsy tiana hilatsaka ka ho hitantsika eo izany.
Andrasana izany ny tena ao anatin’ity lalàm-pifidianana ity ato anatin’ny volana febroary 2018 izay voalaza fa hanaovana ny fivoriana tsy ara-potoana ao amin’ny Antenimierampirenena ao Tsimbazaza ao araka ny feo mandeha omaly.